တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Networking ၏ အခြေခံကျသောအကြောင်းအရာများ (၁) Written By Einstein Kelvin
Networking ၏ အခြေခံကျသောအကြောင်းအရာများ (၁) Written By Einstein Kelvin
Network isaGroup of Internet,that sharing resource & installation.
မြန်မာလို ရှင်းရင် ပိုရှုပ်မှာ စိုးလို့.. အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောလိုက်ပါတယ် . :P
ကွန်ယက်ဆိုသည်မှာ Data တွေ မျှဝေဖို့ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အင်တာနက် အကြီးစားကြီး ပါ...
Network ကို Tepology ၄ မျိုးနဲ့ ခွဲပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
Tepology ဆိုတာကတော့ Basic Structure Of Network Technology ကိုပြောတာပါ..အခြေခံတည်ဆောက်မှူပုံစံပေ့ါ.
1 . Ring Tepology
2 .Bus Tepology
3 .Star Tepology
4 .March Tepology .....ဆိုပြီးတော့ အပိုင်းပိုင်းခွဲထားပါတယ်..
1. Ring Tepology
ဒီနည်းပညာကတော့ အရင်ဦးဆုံး ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ချိတ်ဆက်နည်းတစ်ခုပေ့ါ..
Computer ၄ လုံးဒါမှမဟုတ် Node ၄ ခု ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Network ချိတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့..
Node ဆိုတာကတော့ Network တစ်ခု အတွင်းမှာ ရှိတယ်..ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Device တွေကို ချုံ့ပြောတာပါ..
ထားပါတော့ Computer ၄ လုံး ပုံထဲက အတိုင်း လက်စွပ် ပုံစံ ချိတ်ကြတယ်ဆိုပါတော့.
မရဘူး မဟုတ်ဘူး ရပါတယ်...ဒါပေမယ့် အဲ့ထဲက Computer တစ်လုံးပျက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ ကျန်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ၃ လုံးပါ Network ပြတ်တောက်သွားပါလိမ့်မယ်..
အဓိက အားနည်းချက်က အဲ့ဒါပါ..
ဒါကြောင့် ပညာရှင်တွေက ဒီ Ring Tepology ကို ငြင်းပယ်ပြီး. နောက် နည်းပညာ သစ်တစ်မျိုး ရှာဖွေပြန်ပါတယ်..
2. Bus Tepology
ဒါကတော့ ဒုတိယမြောက် တီထွင်ခဲ့တာပါ..
Node တွေကို Bus ကား ပုံစံ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ချိတ်ဆက်ထားတာပေ့ါ.
သူချိတ်တဲ့ ပုံစံကတော့ Computer တစ်လုံးက Electrons တွေ လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ အဲ့ဒီ့ Electrons တွေက Cable တစ်လျှောက် ပြေးပါတယ်..
Computer တစ်လုံးနဲ့တွေ့တိုင်း. IP တွေ MAC Address တွေ တိုက်ကြည့်ပါတယ်..သဘောကတော့ လိပ်စာမှန်ရဲ့လားပေ့ါ..မှန်တယ်ဆို ထားခဲ့တယ်..မမှန်ဘူးဆိုရင် ဆက်သွားတယ်..
စာပို့သမားကြီး တစ်ယောက်လိုပဲလေ..တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လျှောက်မေးနေတော့ အချိန်တွေ ကြန့်ကြာတာပေ့ါ..ပြီးတော့ Cable ရဲ့ ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်မှာလည်း Terminal လို့ ခေါ်တဲ့ အပိတ်ခေါင်းလေးတွေ နဲ့ ပိတ်ပေးရပါသေးတယ်..
Eletrons တွေ တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး မတိုက်မိအောင်ပေ့ါ..
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့ ကြာတယ် ဆိုပြီးတော့ ပညာရှင်တွေက နည်းပညာအသစ်တွေ ရှာဖွေ ခဲ့ပြန်ပါတယ်..
3 . Star Tepology
ဒါကတော့ ကမ္ဘာမှာ အခု လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ချိတ်ဆက်မှူ နည်းပညာတစ်ခုပါ...
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲ Switch တစ်ခု ကြားခံပြီး ကွန်ပျူတာတွေ အလုံးပေါင်း မြောက်မြားစွာ တပြိုင်နက် ချိတ်လို့ရတယ်..
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးပျက်သွားရင်လည်း သူ့အလုပ်ကို သူဆက်လုပ်ပါတယ်..
ပိုပြီး တိကျလာတဲ့ အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် Sharing တွေ လုပ်နိုင်တာပေ့ါ.. Switch ဆိုတာကတော့ Network ခေါင်းတွေ အများကြီး စိုက်လို့ရတဲ့ Device တစ်ခုပါ..
အခုလက်ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက Star Tepology နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ..
4. March Tepology
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ Network ချိတ်တာမျိုး မှာ အသုံးပြုပါတယ်...
Network ဆက်ကြောင်းတွေ ပြတ်တောက်နေရင်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်တာပေ့ါ..
ဆက်ကြောင်းတွေက များပေမယ့် အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ...
Posted by အောင်မျိုး at 7:53 PM